Tahaka ny voan'ny lota dia ny losy amin'ny ho avy dia toy izany koa, amin'ny endrika olombelona dia afenina ny karazana tonga lafatra. Io karazana io dia tsy maintsy ho torontoronina tsy voafehy, avy eo amin'ny alàlan'ny virijiny teraka. Ny tsirairay izay teraka dia lasa Mpamonjy izao tontolo izao izay manavotra amin'ny tsy fahalalana sy ny fahafatesana.
Efa nisy taloha hoe: very ny teny: lasa lasa nofo. Miaraka amin'ny fampiakarana ny Mpamonjy dia ho hita ny teny very.
Vol. 1 SEPTAMBRA, 1905. Tsia
Ny olana PRIMORDIAL dia tsy afaka nivoatra tamin'ny alàlan'ny toe-javatra tsy mendrika tao anatin'ny tontolo milamina eny amin'ny habakabaka raha tsy misy fitsipiky ny endrika na endrika.
Raha tsy misy fitsipiky ny endrika tsotra dia tsy ho afaka nitambatra ary nivoatra ho endrika mivaingana. Raha tsy misy fitsipiky ny fananganana ny singa eto an-tany, ny zavamaniry ary ny biby, dia tsy afaka hanohy toy izany. Raha tsy misy fitsipiky ny fananganana ny singa eto an-tany, ny zavamaniry ary ny biby, dia hivoahana ary hiverina ao amin'ilay fanjakana faran'izay niainany. Amin'ny alàlan'ny endri-javatra dia ampifanarahana amin'ny fampiasana ary mandroso hatrany amin'ny fanjakana mankany amin'ny fanjakana amin'ny alàlan'ny endrika. Zava-dehibe ny hery rehetra, ary hery daholo, mavesatra ary zava-dehibe ny maha-mpanohitra roa ny singa mitovy amina fiaramanidina rehetra. Ny fijerin'ny fiaramanidina ambony dia lasa raharaha amin'ny fiaramanidina, ary ny toe-tsain'ny fiaramanidina dia lasa toe-tsaina. Avy amin'ny resaka fototra tsotra, amin'ny tontolontsika ary hatrany an-tany, hatrany amin'ny saina ara-panahy, ny zavatra rehetra dia miompana amin'ny resaka sy ny fanahy, - na "hery" toa ny sasany te hiantso ny fanahy - saingy misy fiaramanidina fito amin'ny asany. Miaina eo amin'ny lafiny ara-batana, faran'izay ambany amin'ny zavatra ara-nofo isika, fa tsy amin'ny fampandrosoana.
Ny form dia fitsipika iray manan-danja amin'ny fiaramanidina mivaingana ary, amin'ny maha-fitsipika azy, dia miasa amin'ny planeta fito. Misy endrika-fofonaina, izay ampiasain'ny saina hampidirana voalohany ny fiainany ara-nofo; namorona ny fiainana, izay ranomasin'ny fiainana lehibe izay ampiasain'ny famindrana ny heriny amin'ny alàlan'izao tontolo izao hita; endrika astral, izay ampiasaina ho fifantohana na toerana fihaonana amin'ny hery rehetra sy ny endriny izay, toy ny amin'ny kodiaran'ny mpanefy vilany. endrika ara-pananahana ara-batana, izay ampiasaina ho an'ny fifandanjana na kodiarana mandanjalanja izay ianaran'ny saina mamantatra ny misterin'ny poise, tsy tia tena ary firaisana; endrika-faniriana, izay natao hanoritra sy hahitana an-tsary ary hanasokajiana ireo filana araka ny fivoaran'izy ireo ao amin'ny tontolon'ny biby; endrika eritreritra, - izay noforonin'ny mpanao sary hosodoko, mpanao hosodoko, ary mpanakanto hafa - izay maneho ny toetran'ny saina, dia manondro ny foto-kevitry ny zanak'olombelona, ​​ary manompo ho sisan-javatra na voa araka ny fananganana ny toetra vaovao; endrika isam-batan'olona, ​​izay toetra na ego izay maharitra hatramin'ny fiainana mankany amin'ny fiainana, mitondra ny fitomboan'ny fitomboana. Rehefa nahavita ny fihodinan'ny fivoaran'ny tsirairay ny endrika manokana dia tsy mety maty ao anaty endrika mandritra ny vanim-potoana ary tsy mila mivoaka intsony izy ireo. Alohan'ny hamenoany azy anefa, ny endriny dia mila miova. Misy endri-javatra tena tsara mihoatra ny ambaratonga miakatra, na dia mety tsy hahasoa azy io intsony izao raha manombatombana momba azy ireo.
Toa ny maharitra ny vatan'olombelona ara-batana, nefa fantatsika fa ny fitaovana ao aminy dia atsipy tsy tapaka, ary ny fitaovana hafa dia tsy maintsy ampiasaina hanoloana ireo lamba simba. Ny hoditra, nofo, ra, tavy, taolana, tsoka, ary hery fiarovana, dia tokony hosoloina tahaka ny mahazatra, raha tsy izany dia simba ny vatana. Ny sakafo ampiasaina ho an'ity tanjona ity dia avy amin'ny fihinanana, misotro, fifohana, fofona, maheno, mahita, ary hieritreretana. Rehefa esorina ao anaty vatana ny sakafo dia mandalo ao anaty lalan-drà, izay fiainana ny vatana ao anaty vatana. Izay rehetra azo alain-dranonny ranon'aina ary apetraky ny ra amin ny ranon-dra, na any amin ny toerana rehetra ilaina. Ny iray amin'ireo sangan'asa lehibe indrindra amin'ny fizotran'ny toe-batana ara-batana dia ny hoe aorian'ny fametrahan-tsofina ny zavatra vita amin'ny sakafo, ny zezika dia aorina ao anaty sela izay, dia toy ny fitambarany, dia arakaraka ny endrika ao amin'ny taova sy ny sela ao amin'ny vatana. Ahoana no ahafahan'ny vatana miaina sy mitombo tsy miova amin'ny endriny mandritra ny androm-piainana, raha tsy hoe voaforona sy arakaraka ny endrika voafaritra tsara ilay raharaha ampiasaina amin'ny fananganana azy.
Raha ny fizotry ny ra ao amin'ny vatantsika dia mivezivezy daholo ny raharaha rehetra, dia misy onjam-pandeha mikoriana ao anaty vatan'izao tontolo izao izay mitazona ny olany rehetra hatrany. Mampihena ny hita maso eo amin'ny tsy hita maso ary mamerina indray ny tsy hita maso hita maso izay ny faritra tsirairay ao aminy dia mety hiasa mandroso sy miakatra ho amin'ny fahatanterahana amin'ny alàlan'ny endrika.
Mahita endrika maro tsy hita isa manodidina antsika isika, saingy zara raha manontany ny anton'ny singa hita ireo endrika izay ahitantsika azy ireo isika; na misy endrika sy gross mitovy; inona no endrika; na nahoana ny endrika iray dia tokony hitohy amin'ny karazany mitovy?
Ny olana ara-drariny dia tsy azo atao, raha tsy izany dia tsy hiova haingana izany; na raha niova io dia hiova ho tsy misy endrika manokana. Ny endrika dia tsy mety ho olana madinidinika na hanova endrika azy, na izany aza, hitantsika fa ny vatana rehetra dia miaro ny endriny, na eo aza ny fiovana tsy miova izay hitahiry ny vatana amin'ny endriny. Mahita zavatra goavana isika, ary hitantsika ny endrika misy azy. Raha hitantsika ny zava-mahadomelina, ary hitantsika amin'ny endrika izany, ary ny resaka gross dia tsy misy endrika, na tsy olana ara-nofo akory, dia tsy hitantsika ny fomba misaraka. Avy eo, ny endrika, na dia tsy hita maso aza, dia tsy hita afa-tsy amin'ny alàlan'ny fanampiana, fa, amin'ny lafiny iray koa, dia mamela zavatra ho hita maso, ary amin'ny alàlan'ny fahitana, manondro ny fivoarany any amin'ireo fanjakana ambany; miasa ho toy ny fiara ho an'ny fanabeazana ny saina; ary amin'ny alàlan'ny fanompoana amin'ny fanampiana ny fivoarany amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny saina.
Ireo endrika voajanahary izay hitantsika dia ireo dika mitovy amin'ireo tena endriny misy ireo endrika tsara kokoa. Ny fiainana dia manorina arakaraka ny famolavolana endrika astral ary amin'ny fotoana hisehoan'ny endrika eto amin'izao tontolo izao.
Ny endrika dia eritreritra noforonina. Crystal, litera, na tontolo iray dia samy miseho amin'ny alàlan'ny endrika iray, izay noheverin'ny saina. Ny eritreritry ny androm-piainana dia miforona amin'ny endrika aorian'ny fahafatesana ary manome ilay voa izay, rehefa tonga ny fotoana mety, dia ny toetra vaovao.
Ny toetra, ny tarehimarika ary ny loko, no tena ilaina telo hamboarina. Ny zavatra atao dia ny vatan'ny endrika, ataovy ny fetra sy ny fetrany ary lokony ny toetrany. Ao anatin'ny toe-javatra mety dia mamorona ny ampahan'ny fiainana, ary ny fiainana manangana tsikelikely ny tenany ho tonga endrika ary lasa hita maso.
Ny endri-javatra dia tsy misy noho ny fikambanam-bolo sy hanaratsiana ny saina, na dia mamolavola ny saina aza ny endrika. Ny saina mihitsy no manadino tena sy mamela ny tenany ho voafolaka endrika, ary tokony hitohy amin'ny saina ny saina mandra-pahitany amin'ny endrika sy ny tanjon'ny endrika.
Ny tanjon'ny endrika dia ny fanompoana ho saha, laboratoire, ho an'ny intirety manan-kery miasa. Hankasitraka ny endrika amin'ny lanjan'ny tena izy, sy ny ampahany izay entiny amin'ny fivoaran'ny fitsipika manan-tsaina izay lazaintsika ho saina, tokony ho fantatsika fa misy lalana roa: ny lalan'ny endrika sy ny lalan'ny fahatsiarovan-tena. Ireny ihany no lalana. Ny iray ihany no azo voafidy. Tsy misy olona afaka manao dia. Tsy maintsy misafidy ny fotoana, tsy misy afaka mandà. Ny safidy dia voajanahary amin'ny fitomboana. Tapaka amin'ny alàlan'ny antony manosika ny fiainana izany. Ny lalana nofidina, ny mpandeha dia ivavahana rehefa manao dia izy. Ny lalan'ny endrika dia mandroso sy miakatra, mankany amin'ny toerana avo sy ny voninahitra, fa ny farany kosa dia ny aizina mahavery, satria ny endrika rehetra dia miverina amin'ny zavatra simba. Avy amin'ny faniriana voalohany ny hananana na ho endrika sasany, ny faniriana hananana na hangalan'ny endrika; avy amin'ny faniriana fananana mivaingana ara-batana, mankany amin'ny fankamasinana andriamanitra manokana; ny faran'ny lalan'ny endrika dia mitovy daholo amin'ny rehetra: fandringanana ny isam-batan'olona. Ny endrika lehibe dia mandrafitra ny kely kokoa, ho endrika ara-batana na ara-panahy, ary ny fanompoana dia manafaingana ny fizotrany. Ny endrika mivaingana izay ivavahan'ny sain'ny zanak'olombelona dia manome toerana fiderana amin'ny endriny tsara. Ny andriamanitra kely dia nofahan'ireo andriamanitra lehibe kokoa ary ireo andriamanitra lehibe kokoa, fa ireo andriamanitra sy ny andriamanitry ny andriamanitra dia tsy maintsy, amin'ny faran'ny mandrakizay dia ho voavaha ho zavatra manjambena.
Ny faniriana, faniriana, ary harena, dia mitarika an'izao tontolo izao sy ny fahalalahana amin'izao tontolo izao. Ny endrika mivaona an'izao tontolo izao dia ny foto-kevitry ny endrika mivaingana. Ny fomban'ny fiarahamonina, ny governemanta, ao amin'ny fiangonana, dia tena misy ao an-tsaina ary manana ny endriny tena izy tokoa satria azo antoka fa misy ireo endrika izay nananganana lapa, katedraly, na olombelona.
Saingy ny endrika mivaingana, ary ny endrika endrika eo amin'ny fiaraha-monina, ny governemanta ary ny finoana, dia tsy ratsy ho ringana. Sarobidy ny endri-javatra fa raha tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana izay manampy azy amin'ny fahazoana ny fisainana. Raha tsy manampy amin'ny fandrosoana amin'ny fahatsiarovan-tena izy io dia tena sarobidy.
Ny lalan'ny fahatsiarovan-tena dia manomboka amin'ny fisainan'ny saina. Mitohy ary mitohy miaraka amin'n'io fahatakarana io izany, ary amin'ny famahana ny endriny rehetra ary eritreretina ao an-tsaina. Io dia mitondra fahatsiarovana, izay toa teboka eo afovoan'ny tontolon'ny endriny. Rehefa misy olona afaka mijanona ho tsy mihetsika, tsy matahotra, ary tsy misy ahiahy amin'ny resaka tokana-ness, dia misy io zava-miafina io: mitombo ny teboka irery-ness ary lasa lasa saina tokana.
Miditra amin'ny ranon'izao fiainana izao, mametaka ny zava-dehibe sy mihamalalaka, milentika ao anaty fahatsiarovan-tena ary lasa manadino ny fihetseham-po. Ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po ary ny endriny dia foto-pisainana - ilay tena noforoniny - saingy tsy afaka mifehy ny olom-pehezin'izy ireo nesorin'izy ireo, very saina ary nataony babo ny mpanjakany. Amin'ny alàlan'ny fananganana dia nanjary zava-misy toa tsy misy dikany ny saina, efa nandinika ny tady tsy hita maso ny fihetseham-po izay mahery vaika noho ny fantsom-by, nefa vetivety dia natao ho toy ny rehetra izay tiana eo amin'ny fiainana, amin'ny fiainana izany .
Andriamanitra ny endrika ankehitriny; ny mpisoronabe dia ny fahatsapana sy ny fihetseham-po; ny saina no foto-keviny, na dia mbola namorona aza izy ireo. Ny endriny dia Andriamanitry ny fandraharahana, fiarahamonina ary ny firenena; ny zavakanto, siansa, literatiora, ary ny fiangonana.
Iza no sahy mandà ny fahatokiana an'Andriamanitra? Iza no mahalala sy tsy sahy ary maniry, afaka mampivadika ny andriamani-diso ary hampiasa azy amin'ny fanaparana; hamafa ny babo; mitenena ny lovany masina; ary atombohy ny làlana izay mankany amin'ny Alàlan'ny tsy fahatsiarovan-tena.